Mon, May 25, 2020 at 2:31pm
पश्चिमी न्यूनचापीय वायु सक्रिय, अझै केही दिन हिमपात
काठमाडौं, २९ मंसिर पश्चिमी न्यूनचापीय वायुको प्रभावले देशभर बद्लीसँगै वर्षा तथा हिमपात गरएको छ । गएराति केही उच्च पहाडीसहित हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात भएको जनाइएको छ । अझै केही दिन हिमपातको सम्भावना रहेकाले पहाडीसहित हिमाली भूभागका स्थानमा सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार काठमाडौँमा ३३ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । नेपालगञ्जमा..
काठमाडौँ, २८ मङ्सिर जब हामीलाई कुनै खानेकुरा खान गाह्रो भइरहेको छ भने हामी त्यो खानेकुरा किन खान्छौं ? पछिल्लो वर्ष एउटा अमेरिकी अस्पतालको इमर्जेन्सी कोठामा एउटा व्यक्तिलाई भर्ना गरिएको थियो । उसलाई के भएको छ भन्ने कुरा डाक्टर पत्ता लगाउने कोसिस गरिरहेका थिए । ती व्यक्ति अत्यधिक टाउको दुखाई, गर्द्धनमा पीडा भएकाले छट्पटाइ रहेका थिए र उनी बारम्बार बान्ता पनि गरिरहेका..
काठमाडौँ, २७ मङ्सिर पश्चिमी न्यून चापीय वायुको प्रभावले देशभर पूर्ण बदली भई उच्च पहाडी र हिमाली भू–भागमा हिमपात भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । महाशाखका अनुसार हुम्ला, डोल्पा, मुगुलगायतको उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा हिमपातसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ । बुधबार साँझ नेपाल प्रवेश गरेको पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर चिसो बढेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पश्चिमी..
काठमाडौँ, २७ मङ्सिर पश्चिमी न्यून चापीय वायुको प्रभावले देशभर पूर्ण बदली भई उच्च पहाडी र हिमाली भू–भागमा हिमपात भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । शुक्रबार बिहानदेखि नै काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी भागमा पनि आकाश बादलले भरिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले काठमाडौंमा शुक्रबार साँझ पानी पर्न सक्ने जनाएको छ। आज साँझ ६-७ बजेतिर काठमाडौं उपत्यकामा मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने देखिएको..
एजेन्सी, मंसिर २७ बेलुकी विस्तारामा होस् या बिहान उठ्ने वित्तिकै हामी मोबाइल चलाउन थालिहाल्छौँ । तर, बेलायतको एक्जिटरलगायतका केही विश्वविद्यालयमा गरेको अध्ययनले सिरानी छेउ मोबाइल राखेर सुत्दा निकै धेरै समस्या आउन सक्ने पत्ता लगाएको छ । अध्ययनअनुसार मोबाइललाई सिरानी छेउ राख्दा क्यान्सरमात्र होइन, नपुंसकता पनि हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्यान्सर रिसर्च एजेन्सीले मोबाइल फोनबाट निस्किने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक विकिरणलाई सम्भावित क्यार्सिनोजेनको श्रेणीमा राखेको छ । त्यस्तै,..
सिमकोट, २६ मङ्सिर दोस्रो पटक हिमपात हुँदा हुम्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । पश्चिमी वायु प्रणालीको प्रभावले हुम्लासहित कर्णालीका उच्च हिमाली क्षेत्रमा आज बिहान ६ बजेबाट हिमपात शुरु हुँदा अन्तरजिल्ला पुग्ने हवाई उडान बिहानबाटै प्रभावित भएको छ । हिमपातले गर्दा जिल्लाको एकमात्रै यातायात सेवा हवाइजहाज उडान बन्द रहेको सिमकोट विमानस्थल स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट बिहान ७ बजेदेखि हुम्लामा उडान गर्दै..
काठमाडाैं, मंसिर २६ डण्डिफोर भनेको छालामुनि भएको एउटा सानो झोलाजस्तै हो, जसमा चिल्लो पदार्थ, ब्याक्टेरिया अनि जलन गराउने तत्व रहेको हुन्छ । यसलाई निचार्दा झोलाभित्र भएका सबै तत्वहरू छाला बाहिर निस्कन्छन् र बाहिरको छालामा सङ्क्रमण पनि हुन सक्छ । यसले झन् नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ । साथै, डण्डिफोर निचारिसकेपछि त्यसले झन् बढि जलन गराउन सक्छ र छालामा कालो दाग पनि बस्न सक्छ ।..
काठमाडौँ, २५ मङ्सिर इरान र अफगानिस्तानमाथि रहेको पश्चिमी वायुको प्रणाली आज साँझसम्म नेपालको पश्चिमी भूभागमा प्रवेश गर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । उक्त प्रणालीको प्रभावले नेपालको पश्चिमी उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा भारी हिमपातको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपाउन मौसमविद्ले आग्रह गरेका हुन् । यो प्रणाली बिहीबार अझै सशक्त भई देशका मध्य र पूर्वका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा..
घोराही, २५ मङ्सिर घोराही बजारलाई वातावरणीयरूपमा प्रदूषण हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाले प्लाष्टिक बिक्री गर्ने भएको छ । जथाभावीरूपमा फोहर फाल्दा शहरमा प्रदूषण बढ्ने र ल्याण्डफिलसाइटसमेत भरिने भएकाले घोराही उपमहानगरपालिकाले नगल्ने फोहरका रूपमा रहेका प्लाष्टिकजन्य वस्तु खरीद गरेर बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो । पुनःप्रयोग गर्न सकिने प्लाष्टिक झोला, विभिन्न खाद्यवस्तुका खोललगायतका प्लाष्टिकजन्य वस्तु खरीद गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्ष रु सात..
काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । नङ टोक्ने, नङको प्रयोग गरी काम गर्ने बानी, कमसल र पूरानो कस्मेटिक सामानको प्रयोग आदि कारणले नङ कमजोर तथा अस्वस्थ हुन सक्छ । शीघ्र नङ पालिस सुकाउन लगाएको एक मिनेटपछि बरफको पानीमा नङलाई भिजाउनुहोस् । यस्तो गर्नाले नङ पालिस चाँडै सुक्छ र पालिसको चमक पनि रहिरहन्छ । नङ पालिस लगाउनुअघि नङमा बदामको तेल लगाउनुहोस् । यसो गर्नाले नङ कडा..
काठमाडौँ, २४ मङ्सिर जाडो मौसम मुटुका बिरामीहरुका लागि त्यति अनुकूल मानिँदैन। धेरैजसो मनिसहरु जाडोमा मुटुको समस्या लिएर अस्पताल आउने गरेको पाईएको छ । पछिल्लो समयमा बृद्धहरुमा भन्दापनि युवापिढीमा मुटुको समस्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ । त्यसका पछाडिको कारण भनेको अस्वस्थ्यकर जीवनशैली पनि प्रमुख रहेको धारणा छ। जाडो मौसममा मुटुरोग सम्बन्धी समस्या बढ्ने हुँदा समयमै ख्याल गर्न चिकित्सकहरु सुझाव छ। जाडोमा मुटुको नशा खुम्चिने र..
एजेन्सी, २४ मंसिर आँखाको हेरचाहमा विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । थोरै लापरवाहीले पनि आँखालाई ठूलो हानी पुर्याउन सक्छ । लामो समय कम्प्युटरमा काम गर्दा लगातार कम्प्युटरमा काम गर्दा, मोबाइल चलाउँदा आँखाका लागि असहजता महसुस हुन्छ । मानिसले औसतमा आँखा १२–१५ पटक झिम्काउने गर्छन तर कम्प्युटरमा काम गर्दा आँखा केवल ४–५ पटक मात्र आँखा झिम्काउने गर्छन् । धेरै लामो समय काम गर्दा ड्राई..
काठमाडौँ, २२ मङ्सिर खानालाई चपाउन मात्र नभई अन्य धेरै कुराहरुमा दाँतले सहयोग पुर्याउछ । यदि हाम्रो दाँत पहेलो छ भने अरुसँग हाँस्न निकै अफ्ठ्यारो हुन्छ । बाहिर हिड्दा पनि दाँत चम्किलो छैन भने लाज हुन्छ । दाँत जति सफा गरे पनि कहिलेकाही दाँत सफा हुदैन । दाँतलाई सफा बनाउन तुलसीको पातलाई घाममा सुकाएर पिसेर पाउडर बनाइ ब्रस गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यस्तै..
एजेन्सी, २१ मङ्सिर । शास्त्र र आयुर्वेदमा दिनमा सुत्न अनुचित मानिएको छ । दिउँसो सुत्दा पाचनतन्त्रमा गडबडी हुन्छ र खाना सही तरिकाले पच्दैन । यसले गर्दा कब्जियत, ग्यास, अपच लगायत समस्या आइलाग्नुका साथै मोटोपन पनि बढ्छ । दिउँसो एकछिन आराम गर्दा त कुनै हानि हुँदैन तर खाना खाएर गहिरो निद्रामा जाँदा चाहिँ पेटसम्बन्धी रोग लाग्छ । त्यस्तै दिउँसो सुत्दा ज्वरो, गलासम्बन्धी समस्या,..
काठमाडौँ, २० मङ्सिर । जहिलेपनि मुख धुँदा साबुन अथवा अन्य पदार्थले नधुनु होस् किनकी अनुहारको छाला अन्य अंगको भन्दा संवेदनशील मानिन्छ । सकेसम्म राम्रो फेसवासले अनुहार धुनुहोस् । आफ्नो छाला अनुसार तपाईंले फेसवास प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि तपाईंको छाला सुख्खा छ भने यस्तो फेसवास प्रयोग गर्नुहोस् जसले तपाईंको अनुहारको छालालाई आद्रता र अखण्ड बनाइराख्नेछ । सुख्खा छालाको लागि तपाईंले मह र केसर..
काठमाडौँ, २० मङ्सिर जाडो मौसममा छालालाई सुख्खा र फुस्रो मात्र बनाउँदैन । तर, यसले कपालमा पनि प्रभाव पार्दछ । कपाल टुक्रिएर र कमजोर भई झर्न थाल्छ । त्यसका लागि कपालको स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्ने ठूलो प्रश्न हो । घरेलु उपचार जैतुनको प्रयोग कपाल र छालाको को लागी जैतुनको तेल र दहि धेरै प्रभावकारी हुन्छ । यी दुईको प्याक बनाएर लगाउँदा निकै फाइदा हुन्छ ।..
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । हामीकहाँ कुनै नव दुलाहका लागि दुलही खोज्दा तुलनात्मक रुपले कम उमेरकै खोजिन्छ । अर्थात दुलाहभन्दा दुलहीको उमेर कम हुनुपर्छ । पितृसतात्मक सोंच-चिन्तनले पनि यसमा काम गरेको हुनुपर्छ । अर्कोतिर युवतीहरु पनि आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग दाम्पत्य जीवन विताउने अभिलाषा प्रकट गर्छन् । उनीहरु प्रेम गर्दा होस् वा विवाह गर्दा, आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग गर्न चाहन्छन् । गरिरहेका हुन्छन्..
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर चिसो मौसम शुरु भइसकेको छ । हाम्रो शरीरले न्यायो खोज्न थालिसकेको छ । जाडो मौसममा छाला सुख्खा हुने गर्छ । जसले गर्दा छाला फुट्ने समस्या हुन्छ । छाला मात्र होइन चिसोका कारण ओठ पनि सुख्खा हुने र फुट्ने गर्छ । ओठलाई मानिसको सौन्दर्यको प्रतिकको रुपमा पनि लिइन्छ । त्यसैले ओठ फुट्ने समस्याले सबैलाई तनाव दिन्छ । हाम्रो शरीर र स्वास्थ्यलाई..
एजेन्सी, मंसिर १८ जाडो याममा छाला सम्बन्धी समस्या, स्वास प्रस्वास, हाड जोनी दुख्ने, ढाड दुख्ने, रक्तचाप बढ्ने जस्ता समस्या देखिन्छन् । यसबाट जोगिन हामीले हाम्रो बानी, व्यवहार, खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जाडो याममा हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट जोगिन यी काम नगर्नुहोस् । सनब्लक लोसन नलगाउने जाडोमा घाम चर्किएको महसुस नहुने भएकाले धेरैले जाडो याममा घाममा निस्किँदा सनब्लक लोसन लगाउँदैनन् । तर, छालालाई..
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरर्सले छिटो र गम्भिर तरिकाले सोचेर जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने गरी काम गर्न विश्व जगतलाई आह्वान गर्नुभएको छ । स्पेनको म्याड्रिडमा सोमबारदेखि शुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २५औँ सम्मेलन (कोप–२५) को उद्घाटन सत्रमा उहाँले सो आह्वान गर्नुभएको हो । महासचिव एन्टोनियो गुटेरर्सले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दा विकासशील..
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर जाडौ मौसममा वायुमण्डलमा आद्रता निकै कम हनेहुनाले, हावामा पानीको मात्रा कम हुने र शरीरको तापक्रम नमिल्ने हुदाँ यसको असर सिधै छालामा पर्नसक्छ । छाला चिलाउने, खस्रो हुने, राता राता डाबर आउने र छाला फुट्ने समस्या हुने गर्छ । हुन त राता राता डाबर अरु रोगको पनि लक्षण हुन सक्छन्, समयमा नै चिकित्सक कहाँ गएर रोग पत्ता लगाउन सके छालाको..
काठमाडौं, मङ्सिर १६ । जाडोसमयमा बिहान बेलुका वायुमण्डलमा भाइरस लगायत जीवाणु र तल्लो तहमा बढी सकृय हुन्छन्, त्यस्तै धुलोको कण पनि वायुमण्डलमा नै जम्मा हुन्छ । यो समयमा माक्स नलगाएमा श्वासप्रश्वास, छाला, डायरिया र रुघाखोकीले सताउन सक्छ । जाडोमा पानी तिर्खा कम लाग्छ गर्मीमा जस्तो शरीरबाट पसिना नआउने हुदाँ पानी कम खाइन्छ । जसको कारण छाला फुस्रो हुने, ओठ फुट्ने र कव्जियत..
काठमाडौँ, १३ मङ्सिर केही दिनयता काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम दिनहुँ घट्दो क्रममा रहेको छ । गत बुधबारदेखि उपत्यकाको तापक्रम दैनिक दुई देखि तीन डिग्री सेल्सियसले घटिरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । तापक्रम घटेर चिसो बढ्नु कुनै नयाँ प्रणालीको प्रभाव नभइ मौसमी कारण भएको मौसमविद् प्रतिभा मान्नधरले बताउनुभयो । “डिसेम्बरदेखि जनावरी २० सम्म निरन्तर तापक्रम घट्दै जाने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आज काठमाडौँ उपत्यकाको..
हुम्ला, मङ्सिर १३ । हुम्लामा यसवर्षको हिमपात सुरु भएको छ । विशेषगरी उत्तरी हुम्लामा बिहीबार बेलुकाबाट सुरु भएको हिमपात शुक्रबार बिहानैबाट झन् बाक्लो भएको जनाइएको छ । हुम्लामा विहिबार राति ८ः०० बजेबाट हिमपात सुरु थियो भने हिमपात शुक्रबार बिहान पनि जारी नै रहेको छ । यसअघिका पटक पहिला पानी परेपछि मात्रै हिउँ पर्ने गरेको भएता पनि यसपटक भने सीधै हिउँ पर्न सुरु..
काठमाडौँ, १२ मङ्सिर पुतलीसडकको जेब्राक्रसिङमा मानिसको ठूलो भीड थियो । दायाँबायाँ टल्कने रातो ट्राफिक स्वयंसेवक ज्याकेट लगाएका किशोरीहरु देखेपछि धेरैले जथाभावी बाटो काट्ने हिम्मत गरेनन् । बाटो काट्न खोजेकालाई किशोरीहरुले रोकिदिए । जोखिमको हेक्का नराखी कोही कपाल हल्लाउँदै र कोही मोबाइल चलाउँदै मस्तसँग बोटो काटिरहेका हुन्छन् । रोक्न खोज्दा कोहीले सहजतापूर्वक स्वीकारे पनि धेरैजसो अटेर गर्छन् । सुन्धाराथिस्त नेपाली सेनाको अफिसर्स क्लब..
नेपालगञ्ज समाचारदाता नेपालगञ्ज, मङ्सिर ११ गते । चाडपर्व सकिएलगत्तै नेपालबाट रोजगारीका लागि दैनिक सयौँ नेपाली भारत जाने क्रम फेरि सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ५ का पहाडी र तराई जिल्लाबाट आएर नेपालगञ्ज हुँदै भारत पस्ने नेपालीको हरेक दिन ओइरो लाग्दै आएको छ । सीमा नाकामा रहेको प्रहरीका अनुसार कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ५ का पहाडी र तराई भेगका सयौँ युवा..
काठमाडौँ, १० मङ्सिर पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभरको मौसममा बदली आउने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । विभागका अनुसार मंगलबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने छ भने सुदूर–पश्चिमका पहाडी क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ ।यसैगरी उच्च पहाडी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । यस्तै मंगलबार राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने मौसमविदले जनाएका..
काठमाडौँ, ८ मङ्सिर सामान खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत कुराहरू जस्तै ब्याट्री, बिक्रीपछिका सेवा सुविधा आदिका बारेमा ध्यान दिनुहोला । ल्यापटपमा आवश्यक पर्ने अन्य सामग्रीहरूमा ल्यापटप ब्याग, एक्सटर्नल हार्डडिस्क, कन्र्भटर, हेडफोन, राउटर वा इन्टरनेट चलाउने उपकरणा आदिमा पनि ध्यान दिनुहोला । मुख्यत : ल्यापटपका आकार र प्रकारअनुसार ल्यापटपलाई निम्न पाच समूहमा बाड्न सकिन्छ । १. युएमपिसी २. नेटबुक ३. नोटबुक ४. डेस्कटप रिप्लेसमेन्ट ५. अल्ट्राबुक १. युएमपिसी (Ultra..
काठमाडाैं, मंसिर ८ । कतिपय बिरामीका लागि भने तितेकरेला विष साबित हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता समस्या भएका व्यक्तिले तितेकरेलाको सेवन गर्नु हुदैन । जसमा कलेजोको समस्या छ तितेकरेलाको अत्याधिक प्रयोगले कलेजोमा एन्जाइम्स बढ्न सक्छ, जसले इन्फेक्सनको सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले कलेजोको रोगबाट ग्रसित मानिसले करेलाको प्रयोग गर्नु हुँदैन । महिनावारी समस्या बढी करेला खानाले महिनावारीको समस्यामा अत्याधिक रक्तश्राव हुन सक्छ । त्यसैले महिनावारीको समस्या..
एजेन्सी, ८ मङ्सिर । कोलम्बिया युनिभर्सिटी इर्भिङ मेडिकल सेन्टर न्युयोर्कस्थित महिला मानसिक स्वास्थ्यकी अध्यक्ष क्याथरिन मंकको नेतृत्वमा भएको उक्त अनुसन्धानमा यस्तो पत्ता लागेको हो । उनी भन्छिन्, “आमाको गर्भ भनेको बच्चालाई प्रभाव पर्ने पहिलो घर हो र गर्भाशयमा पुरुषहरु बढी संवेदनशील हुन्छन् ।” प्राकृतिक रुपमा प्रत्येक १०० जन्ममा औसतमा पनि १०५ जना पुरुष हुने गर्दछन् । तर यस अध्ययनमा उच्च रक्तचाप लगायत..
Results 740: You are at page4of 25